Nepali Christian Bible Study Resources - पवित्र आत्माको ईश्वरत्व
» अध्ययन मालाहरू » पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य » २ पवित्र आत्माको ईश्वरत्व
पवित्र आत्माको ईश्वरत्व
पाठ २ — पवित्र आत्माको ईश्वरत्व
१)पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने बाइबलमा पवित्र आत्मालाई परमेश्वरसँग बराबर गरिएको छ।
प्रेरित ५:१-५ पढ्नुहोस्। हनानिया र सफिराको पाप के थियो? आफ्नो सम्पत्ति बेचेर केही पैसा आफ्नै निम्ति राख्नु अनि मण्डलीलाई पूरै पैसा दिएको जस्तो गर्नु। पैसाको केही हिस्सा आफ्नो निम्ति राखेकोमा पत्रुसले उनीहरूलाई दोष लगाएका होइनन्। उनले तिनीहरूलाई यो पनि बताए, कि आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नलाई पैसा उनीहरूकै अधिकारमा थियो (४ पद)। उनीहरूले पूरै पैसा नदिए तापनि सबै पैसा दान गरेको झूटो प्रभाव पार्न खोज्नु नै उनीहरूको समस्या थियो। त्यसैले यो एक झूट्टो कुरा थियो; उनीहरूले वास्तविकतालाई लुकाइराखेका थिए।
३ पद अनुसार हनानियाले कसलाई झूट बोले? ________________________________ (याद राख्नुहोस्, धोकादारी प्रति “सत्यको आत्मा” कहिल्यै प्रशन्न हुनुहुन्न—यूहन्ना १६:१३)। ४ पद अनुसार हनानियाले कसलाई झूट बोले? ________________ यी दुई पदहरूमा पवित्र आत्मालाई परमेश्वरसँग समीकृत गरिएको छ।
१ कोरिन्थी ३:१६ पढ्नुहोस्। परमेश्वरको मन्दिर त्यो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ। परमेश्वर पुरानो नियमको समयमा यरूशलेमको मन्दिरमा बस्नुभयो र विशेष तवरले आफ्नो महिमा प्रदर्शन गर्नुभयो। आज यरूशलेममा परमेश्वरले वास गर्नुहुने कुनै मन्दिर छैन, तर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूभित्र, उहाँको मण्डलीमा वास गर्न रोज्नुभएको छ। १ कोरिन्थी ३:१६ अनुसार परमेश्वरको मन्दिरमा कसले वास गर्नुहुन्छ? ________________________ परमेश्वरको मन्दिर भनेकोचाहिँ परमेश्वर वास गर्नुहुने स्थान भएकोले र त्यहाँ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुने भएको हुनाले, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी हामी निश्कर्ष निकाल्न सक्छौं। यही कुरा सिकाउने १ कोरिन्थी ६:१९ र एफेसी २:२१-२२ लाई तुलना गर्नुहोस्। जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वर ऊभित्र वास गर्नुहुन्छ र उसमा काम गर्नुहुनेचाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्दछ, तब यस सत्यताले परमेश्वरको हरेक सन्तानको दैनिक जीवनमा ठूलो असर पार्नुपर्छ (फिलिप्पी २:१३; एफेसी ३:२०; कलस्सी १:२९)। हामीहरूभित्र जीवित परमेश्वर, अर्थात् पवित्र आत्मा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। तपाईं हरेक बिहान बिउँझनुहुँदा, के परमेश्वर तपाईंभित्र वास गर्नुहुन्छ भनी आफैंलाई सम्झना गराउने गर्नुहुन्छ?
हिब्रू १०:१५-१६ लाई यर्मिया ३१:३३ सित तुलना गरौं। हिब्रू १०:१५ मा को बोल्दै हुनुहुन्छ? _______________________ हिब्रू १०:१६ मा को बोल्दै हुनुहुन्छ? ________________ यर्मिया ३१:३३ मा को बोल्दै हुनुहुन्छ? __________________ पुरानो नियममा प्रायश: “परमप्रभु” भनिने शब्दले हिब्रू अक्षरको यहोवा (सत्य परमेश्वरलाई जनाउने अति पवित्र नाम) शब्दलाई जनाउँछ। पवित्र आत्मालाई प्रभुसँग समीकृत गरिएको छ (हिब्रू १०:१६) र उहाँलाई यहोवासँग समीकृत गरिएको छ (यर्मिया ३१:३३)। यसकारण, पवित्र आत्मा एकमात्र सत्य परमेश्वर, अर्थात्, यहोवा हुनुहुन्छ! (पवित्र आत्मालाई एउटा सामान्य झोक्का वा वस्तु भनी व्याख्या गर्ने यहोवाका साक्षीहरू उहाँ वास्तवमा यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्दा छक्क पर्नेछन्!)
२)पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने उहाँमा सबै ईश्वरीय चरित्रहरू छन्। उहाँमा सबै ईश्वरीय गुणहरू छन्; परमेश्वर हरेक कुरामा जे हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि उही हुनुहुन्छ।
उहाँको नाम नै “परमेश्वरका ____________ आत्मा” हो (एफेसी ४:३०)। १ यूहन्ना २:२० ले पवित्र आत्माको बारेमा कुरा गरेको हो भनी धेरै बाइबल विद्वानहरूको विश्वास छ। यस पदमा उहाँलाई “_____________ जन” भनिएको छ। यशैया ८ अध्यायमा परमेश्वरको पवित्रतालाई जोड दिइएको छ। स्वर्गदूत जस्ता प्राणीहरू यसो भन्दै कराए, “सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र, _____________, ____________ हुनुहुन्छ” (यशैया ६:३)। यस पदमा परमेश्वर बहुसङ्ख्यामा एक हुनुहुन्छ भन्ने संकेत छ। ८ पदमा परमेश्वरले यसो भन्नुभएको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, “______ निम्ति को जाला?” उत्पत्ति १:२६ सित पनि तुलना गर्नुहोस्। सम्भवत: यसले “पवित्र” शब्दलाई तीन पटक दोहोर्याइनुको कारण पनि व्याख्या गर्दछ। पिता परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। पुत्र परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। “पवित्र, पवित्र, पवित्र” नामक भजनका लेखक रेगिनाल्ड हेबेरले (Reginald Heber) यो खण्डलाई यसरी नै व्याख्या गरेका छन्।
हिब्रू ९:१४ मा उहाँलाई “_____________ आत्मा” भनिएको छ।
भजनसङ्ग्रह १३९:७-१० ले परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनी सिकाउँदछ। हामी उहाँको उपस्थितीबाट भाग्न सक्दैनौं किनभने उहाँ हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ। (एकपटक एकजना अविश्वासी मानिसले एउटी सानी ठिटीलाई यसो भनेछ, “यदि तिमीले परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनी मलाई देखाउन सक्यौ भने, म तिमीलाई एउटा स्याउ दिनेछु।” उसले जवाफ दिई, “हजुर, यदि तपाईंले परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्न भनी मलाई देखाउन सक्नुभयो भने, म तपाईंलाई एक घ्याम्पा स्याउ दिनेछु!”) ७ पदमा एउटा प्रश्न सोधिएको छ, “तपाईंको _________ म कहाँ जाऊँ?” यसको जवाफ स्पष्ट छ। उहाँको आत्मादेखि तपाईं कहीँ पनि जान सक्नुहुन्न किनभने परमेश्वरको उपस्थिती हरेक ठाउँमा छ। आत्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। निश्चय पनि, परमेश्वरका आत्मा पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा रहेका हरेक विश्वासीभित्र रहनुभएको तथ्य पनि पवित्र आत्मा एउटै स्थानमा मात्र सिमित हुनुहुन्न भन्ने कुराको संकेत हो।
“आत्माले ________ ___________ तलाश गर्नुहुन्छ, अँ, परमेश्वरका गहिरा-गहिरा कुराहरू” (१ कोरिन्थी २:१०)। परमेश्वरको बारेमा पवित्र आत्मालाई ज्ञान नभएको र थाह नभएको कुनै पनि कुरा छैन। यशैया ४०:१३ मा पवित्र आत्मालाई शिक्षकको खाँचो पर्दैन भनी हामी सिक्न सक्छौं। यदि उहाँलाई कुनै शिक्षकको खाँचो पर्दैन भने, उहाँलाई सबै कुराहरूको ज्ञान हुनैपर्छ।
मानिसहरूलाई शक्तिको अभाव हुन्छ तर परमेश्वरमा कुनै अभाव छैन। जकरिया ४:६ मा यसरी पढ्छौं, “न बलद्वारा, न __________, तर मेरो आत्माद्वारा, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ।” यसको अर्थ पवित्र आत्मा शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। लूका १:३४-३५ लाई लूका १:३७ सँग तुलना गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले असम्भव कामहरू गर्नसक्नुहुन्छ। कन्या जन्म असम्भव थियो, तर परमेश्वरको निम्ति त होइन!
१ यूहन्ना ५:६ मा हामी पढ्दछौं, “आत्मा ___________ हुनुहुन्छ”। उहाँलाई “_________को आत्मा” पनि भनिएको छ (यूहन्ना १४:१७ र १६:१३)। उहाँ बाइबलको पनि लेखक हुनुहुन्छ जुनचाहिँ “____________ वचन” हो (२ तिमोथी २:१५)।
मण्डलीमा आत्मिक वरदानहरू बाँड्ने सवालमा परमेश्वरका आत्माले निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, र उहाँले “आफ्नै इच्छाअनुसार” त्यसो गर्नुहुन्छ (उहाँको सार्वभौम निर्णयअनुसार)। पवित्र आत्माले स्थानीय मण्डलीहरूमा आत्मिक अगुवाहरू (निरिक्षकहरू) को हुनुपर्ने हो भन्ने निर्णय पनि गर्नुहुन्छ (प्रेरित २०:२८)। निश्चय पनि, यी सबै कामहरू उहाँले पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरसँग सिद्ध समन्वयमा गर्नुहुन्छ।
प्रकाश १:४ पढ्नुहोस्। शास्त्रहरूमा सात सङ्ख्यालाई पूर्णता र सिद्धता जनाउन प्रयोग गरिएको छ। प्रकाश १:४ ले यशैया ११:२ लाई संकेत गरिरहेको हुनसक्छ। यस पदको आशय त्यहाँ सात पवित्र आत्माहरू छन् भन्ने होइन, तर यसको अर्थ पवित्र आत्मा समझमा, ज्ञानमा, बुद्धिमा, सामर्थ्यमा र अन्य हरेक कुरामा सिद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हो।
३)पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने उहाँले परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कार्यहरू गर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले मात्र सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, र उत्पत्ति १:२ मा पवित्र आत्मा सृष्टिको कार्यमा सकृय रूपमा कार्य गरिरहनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौं। अय्यूव २६:१३ मा लेखिएको छ, “आफ्नो आत्माद्वारा उहाँले आकाश _____________ छ”। “सिँगार्नु” भनेको सजाउनु, सुन्दर बनाउनु, सुशोभित पार्नु हो। पवित्र आत्माले आकाशहरूलाई सुन्दर बनाउनुभयो र तिनलाई गौरवले भरिदिनुभयो। सृष्टि कार्यमा पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय चित्रकार हुनुहुन्छ।
मुक्तिको सवालमा (ख्रीष्टमा एउटा नयाँ सृष्टि हुने कुरामा), पवित्र आत्माको मूख्य भूमिका छ। जोडा मिलाउनुहोस्:
परमेश्वरले मात्र मुक्ति दिनुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वरको कामबिना कसैले पनि मुक्ति पाउन सक्दैन।
मत्ती १:२०—“आफ्नी पत्नी मरियमलाई आफूकहाँ ल्याउन नडराऊ, किनकि जो उनको गर्भमा हुनुहुन्छ, उहाँचाहिँ ___________ ______________ हुनुहुन्छ।” यस उदेकको गर्भधारणमा पवित्र आत्मा पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो। कन्या जन्म एउटा आश्चर्यकर्म थियो जुनचाहिँ परमेश्वरद्वारा मात्र हुन आउन सक्थ्यो। लूका १:३५ मा हामीले सिक्न सक्छौं कि यस आश्चर्यकर्ममा पवित्र आत्माको गहिरो सहभागिता थियो। अविश्वासीहरूले यसो भन्लान्, “कन्या जन्म पूरै असम्भव छ”। उनीहरूले ठीकै भनेका हुन्। एउटी स्त्रीको निम्ति कुनै पुरुषको सहभागिताबिना गर्भधारण गर्नु असम्भव छ। तर ३७ पदलाई बिचार गर्नुहोस—“किनभने _____________ निम्ति कुनै कुरा पनि ______________ हुनेछैन।” आश्चर्यकर्मप्रति समस्या हुने मानिसहरूको वास्तविक समस्या आश्चर्यकर्मप्रति हुँदैन। उनीहरूको समस्या परमेश्वरप्रति हुन्छ। उनीहरूका ईश्वर निकै अल्प र निकै कमजोर हुन्छन्। तर बाइबलका परमेश्वरको निम्ति, उहाँले गर्न नसक्नुहुने कुनै पनि कुरा छैन। पवित्र आत्मा परमेश्वरका निम्ति, कन्या जन्म कुनै कठिन कुरा होइन!
बाइबल परमेश्वरको वचन हो (२ तिमोथी ३:१६—“सबै पवित्रशास्त्र परमेश्वरद्वारा निश्वासित हो,” अक्षरश: अनुवाद)। बाइबल परमेश्वरको मुखबाट आएको हो (यशैया ४०:५)। बाइबलको लेखक परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, र बाइबलको आफ्नो पूर्ण रूप ल्याउनको निम्ति पवित्र आत्माको मूख्य भूमिका रहेको छ। २ पत्रुस १:२१ लाई विचार गर्नुहोस् जहाँ परमेश्वरको वचन कसरी आयो भनी हामीलाई बताइएको छ—“किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू __________ ____________ प्रेरणा पाएर बोले।” यी मानिसहरूले ठीक त्यही लेखे जे उनीहरूले पवित्र आत्माद्वारा चलाइएर र अगुवाइ गरिएर लेखेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो।
दाऊदले थुप्रै भजनहरू लेखे (२ शमूएल २३:१), तर परमेश्वर पनि त्यहाँ सरिक हुनुहुन्थ्यो। २ शमूएल २३:२ अनुसार, दाऊदलाई ठीक शब्दहरू लेख्नको निम्ति कसले अगुवाइ गर्दैहुनुहुन्थ्यो? __________________________ बाइबलको हरेक पुस्तकमा दुवै मानवीय लेखक र ईश्वरीय लेखक हुनुहुन्छ। यहाँ मानवीय लेखकचाहिँ दाऊद थिए र पवित्र आत्मा ईश्वरीय लेखक हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले दाऊदको कलमलाई सुन्दरतापूर्वक प्रयोग गर्नुभए तापनि, अन्तिममा विश्लेषण गर्नुपर्दा, दाऊदले लेखेका कुराहरू परमेश्वरका वचन थिए।
परमेश्वरको आत्माले नयाँ नियमको लेखन कार्यमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। सुसमाचारका पुस्तकहरू ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइको निकै वर्षपछि लेखिएका थिए; अझ भन्ने हो भने, यूहन्नाको सुसमाचार पहिलो शताब्दीको करिब अन्ततिर भन्दा अगाडि लेखिएको थिएन होला। यतिका वर्षपछि सम्म पनि कसरी सुसमाचारका लेखकहरूले येशूका शब्दहरू सम्झन सकेका होलान्? (यूहन्ना १४:२६ हेर्नुहोस्)।
_______________________________________________ _________________ पवित्र आत्माले चेलाहरूलाई “सबै ____________ डोर्याउनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१३) र उनीहरूलाई “____________ कुराहरू बताउनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१३) भनी हाम्रा प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। “आउने कुराहरू” को अर्थ प्रकाशको पुस्तक र नयाँ नियमका पुस्तकहरूमा (जस्तै प्रभुको आगमनको बारेमा बताउने १ थेस्सलोनिकी) अरू भविष्यका कुराहरू (अगमवाणी) हुन्। १ यूहन्ना १६:१४-१५ मा पवित्र आत्माले ख्रीष्टका कुराहरू देखाउनुहुनेछ वा प्रकट गर्नुहुनेछ भनी ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। नयाँ नियमका थुप्रै पत्रहरूमा हामीले ठीक यही कुरा भेट्टाउँछौं। जस्तै, रोमीको पुस्तकमा विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको बारेमा महान् सत्यताहरू प्रकट गरिएका र व्याख्या गरिएका छन्। भजनका लेखकले यसरी लेखेका छन्, “पवित्र आत्मा सिकाउनुहोस्, रहस्य ख्रीष्टको देखाउनुहोस्।”
४)त्रिएक परमेश्वरका अन्य सदस्यहरूसँग सम्बन्धित हुनुभएको हुनाले पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
मत्ती २८:१९ र २ कोरिन्थी १३:१४ लाई विचार गर्नुहोस्। यदि पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, र यदि पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, उहाँहरूसँग निकट सम्बन्धमा उल्लेख गरिनुभएको पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनैपर्छ। यसको अर्थ त्यहाँ तीनजना परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने होइन, तर बरू त्रिएकत्वमा उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा हो। उहाँ तीन व्यक्तित्वमा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ।
यूहन्ना १४:१६ मा प्रभु येशू जाँदैहुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले “अर्को शान्तिदाता” लाई, अर्थात् उही प्रकारको अर्को (एल्लोस) व्यक्ति पठाउनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उहाँले अर्को व्यक्ति, अर्को सहकर्मी पठाउनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो जो उहाँजस्तै हुनुहुनेथियो। जसरी येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
« पवित्र आत्माको व्यक्तित्व
पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने कार्य »